Bhitarkanika Tourism Packages | Antsoy izahay: 993.702.7574
Ny Valan-javaboarin'i Bhitarkanika no faharoa ara-tontolo iainana faharoa any Inde. Sand Pebbles Ny fizahantany Bhitarkanika dia hamela anao hiaina ny hatsaran-tarehin'ny tany mando. Ny tanin'ny ala honko maitso, ny vorona sy ny sokatra mivelona, ​​ireo voay mitsingevingana miaro ny renirano, ireo rano mandevona, ireo tranokely manodidina ny fidoboky ny vorona sy ny natiora dia manintona ireo mpitsidika avy any amin'ny toerana lavitra sy lavitra mba hitarihana ireo toerana tsy manan-tsahala . Ny mpahay siansa, ny manam-pahaizana, ny tia ny natiora ary ny mpizahatany dia manana sakafo be dia be ho an'ny eritreritra sy ny fikarohana. Ny fizahantany Bhitarkanika dia mirakitra ireo sehatra rehetra amin'ny fisintonana. Io toerana io dia iray amin'ireo fananganana tsara indrindra hatramin'izay. Bhitarkanika dia toeram-ponenana tsy manam-paharoa amin'ny ala Mangrove izay miforitra amin'ny toeram-pisakafoanana sy dobo maro ao amin'ny distrikan'i Kendrapara ao Odisha. Iray amin'ireo toeram-piarovana mangatsiaka indrindra any India, Bhitarkanika dia trano fonenan'ny biby sy biby isan-karazany. Amin'ny sambo Sand Bhitarkanika Ny sari-tany momba ny fizahantany dia afaka manana ny traikefa azonao. Ny fahasamihafan'ny bio dia manintona ireo mpitsidika ny haren'ny natiora. Bhitarkanika National Park Ny alatsinainy ho avy izao dia ny karazana leoparda, ny saka-trondro, ny ala mikitroka, ny hyena, ny lambo, ny saka, ny sambar, ny pokopine, ny dolphine, ny voankazo salady, anisan'izany ny voay bitika, python, king cobra, , kitapo, gorodona, gisa mitongilana, Brahmani duck, pintail, voromahery fotsy fotsy, trondro, goaika, vorondrano ary karazan'olona maro be sy vorona mpifindra monina. Noho izany, raha tsy misy ado bebe kokoa, kitapo ny kitapo ho an'ity fitsangatsanganana an-jatony ity miaraka amin'ny Tourisme Sandbebles Bhitarkanika Tourism.
Where To Stay: Sand Pebbles Bhitarkanika Jungle Resabe ao amin'ny Bhitarkanika National Park dia manome trano fialofana an-dakilasy miaraka amin'ny trano maotina mandritra ny alina.
â € "14 SWISS TENTS (Double Bed, Bed Andriana, Efitrano fizarana efatra).
Fialofana miadana (non-AC) ao amin'ny tranom-panjakana Swiss ao amin'ny Plan AP sy MAP.
Ny Sand Pebbles Bhitarkanika Jungle Resorts dia manolotra entana sarobidy natokana indrindra ho an'ny mpizahatany - na avy any an-trano na any ivelany.
Rack Rate:Room Tariff: amin'ny INR: Per Night Avy amin'ny 01st Aug 2018 hatramin'ny 31 Jolay 2019.
Tsy AC SWISS-TENT
sakafo maraina + (sakafo antoandro na sakafo hariva) sakafo maraina + antoandro + sakafo
Double 5,800 6,900
Triple 8,300 9,800
4-Bed 10,400 12,300
Ny saran-dàlana dia anisan'izany ny haba rehetra. (Manoloana ny fanovana amin'ny ho avy).
Ireo zaza latsaky ny 5 taona dia afaka.
Ny famandrihana dia miankina amin'ny fahazoana.
Toeram-pialan-tsasatra Soisa any amin'ny Sand Pebbles Bhitarkanika Jungle Resorts (Bhitarkanika National Park).
Bhitarkanika National Park dia mijanona akaiky ny 01st Mey hatramin'ny 31t Jolay ho an'ny fikarakarana sy fialana amin'ny toeram-ponenany ary manokatra indray ny mpizahantany amin'ny 01st August isan-taona.
Ambony ny sanda dia tsy azo ampiharina amin'ny asabotsy. Azo alaina koa ny fampakarana.
Kitiho eto Ho an'ny Famandrihana / Famandrihana politika.
1 ora lahatsoratra andian-tsoratra. Ovay tsindrio ny bokotra hanova lahatsoratra ity. Lorem ANIO dolor mipetraka amet, consectetur adipiscing elit. UT elit elit, luctus NEC ullamcorper mattis, dapibus Leo pulvinar.
Amena ary asa: Tanteraka fanaka dainy avy, Restaurant sy fahadiovana Food, fandriana mihantona (nitaredretra), jono Rod Available (Angling), 24-ora rano, Miraikitra Bathrooms, Bonfire Place, 24-ora Herinaratra amin'ny indray-up Generator, Classic Modern Amenities, Maresaka Rejuvenating Atmosfera , Ambiance maimaimpoana maimaim-poana, fanampim-panafarana / dipoavatra avy amin'ny sambo (afa-tsy ny fidirana / fialana)
Tolotra sy tolotra omena: Fialam-boly mahavariana, sakafo matsiro tsara tarehy, fialamboly scenic, fitsangatsanganana, fitrangan-javatra, raharaha ara-barotra, fitsangatsanganana, fialantsasatra, tetik'asa fanatontosana sy fialan-tsasatra, fialantsasatra mifototra amin'ny lohahevitra.
Major Attractions: Ny vorona amin'ny karazana 170 samihafa, 08 kanto tsara tarehy avy amin'ny Kingfishers, Storky Based Open, ny Eagles Sea, Kites, Sand Pipers, Darters, Teufs Whistling, Sea Gulls, Ny voay 22-foot (Kaalia), Famokarana fotsy malaza (Gauri), manangom-bokatra eo amin'ny mudflat, kofehy mena, kisoa anana, maso marefo, king cobra, pythons
Points Points: Khola sy Gupti no teboka roa miditra ao amin'ny Valam-pirenena Bhitarkanika. Ny mpitsidika dia tokony hiditra amin'ny alàlan'ny Valin'ny Valan-java-borona ao amin'ny ala Khola sy Gupti Dept. Ny sambon-trano manokana dia misy amin'ireo toerana ireo. Birao manokana ihany koa dia hita ao amin'ny JAYANAGAR & CHANDBALI. Ny teboka fidirana dia mifandray tsara amin'ireo tanàn-dehibe Odisha.
Bhubaneswar - 160 KMS mankany amin'ny toeran'i Khola / Gupti
Cuttack - 140 KMS mankany amin'ny toeran'i Khola / Gupti
Bhadrak - 70 KMs mankany amin'ny fidirana Jayanagar Via Chandbali
Ny Railway Station:
Avy ao Bhadrak - 70 KMs mankany amin'ny fidirana Jayanagar
Avy any Cuttack - 140 KMs mankany amin'ny toerana fidirana Khola / Gupti
Avy ao Bhubaneswar - 160 KMs avy ao amin'ny toerana fidirana Khola / Gupti
Airport akaiky: Bhubaneswar